Posted by: Balaleti 04-January-2012	41 Comments
Maalin wanaagsan akhristayaasheena qiimaha leh meel kasta oo aad joogtaan, waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda. Barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinaa wararka xanta ah ee wargeysyada qaarada yurub ay ka qoraan maalin walba suuqa kala iibsiga.
Ilaa iyo inta uu suuqa kala iibsiga furan yahay, laacib.net maalin kasta ayay barnaamijkaan idiin soo gudbin doontaa.
Wararka ku saabsan suuqa kala iibsiga waxaa xuquuqdooda iska leh wargeysyada ku qoran.
CHELSEA: Wargeyska Daily Mirror ayaa qoraya in waxa kaliya ee hakianaya heshiiska Gary Cahill uu ugu wareegi lahaa Chelsea ay tahay fasaxa uu ku maqan yahay milkiilaha kooxda Roman Abramovich, lakiin wargeyska Daily Express ayaa isna sheeko ka duwan qoraya waxaana ay sheegayaan in heshiiska uu hakad ugu jiro Chelsea oo weli ay u cuntami la’dahay liiska dheer ee uu wato Cahill. Gary Cahill ayaa dalbaday inuu qaato mushahar gaaraya 120 kun ginni, iyo inuu helo boos joogta ah si uu booska uga helo Euro 2012. Sidaasi waxaa qortay Daily Expess.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Chelsea iyo xulka England Frank Lampard ayaa sheegay inuusan ka tagi doonin kooxda Chelsea, waxaana uu ka digay inay kooxda iska iibiso ama iska fasaxdo ciyaartoy badan oo ka mid ah ciyaartoyda waa weyn ee kooxda Blues. Warkaan waxaa qortay London Evening Standard.
Kooxda Marsielle ayaa kula biirtay kooxda kale ee Faransiiska Dijon doonista ciyaaryahanka da’da yar ee kooxda Chelsea Gael Kakuta. Sidaasi waxaa daabacday jariirada Daily Mirror.
LIVERPOOL: Kooxda Reds ayaa weydiisatay Crystal Palace hadii uu iib ka yahay weeraryahankooda da’da yar Wilfried Zaha. Sidaasi waxaa dabacday wargeyska The Times.
Newcastle ayaa beenisay inay amaah ku qaadaneyso weeraryahankeedii hore oo haatan u jooga kooxda Liverpool Andy Carroll, inkastoo ay soo baxayaan warar la xiriirinayay inuu dib ugu laabanayo St James Park. Sidaasi waxaa qortay Newcastle Chronicle.
Kooxda Turkiga ee Galatasaray ayaa dooneysa inay tijaabiso Liverpool, iyagoo doonaya inay arkaan in Reds ay ka maaranto madaalahooda reer Holland Dirk Kuyt, kaasoo boos joogta ah u dagaalamaya kooxda qaabka cusub leh ee uu hogaaminayo Kenny Dalglish. Sidaasi waxaa daabacday jariirada London ka soo baxda ee Metro.
ARSENAL: Tababare Arsene Wenger ayaa baadigoobkii uu ugu jiray inuu helo daafac waxa ay geysay horyaalka heerka labaad ee Oman, waxaana uu dalab labo maalmood ah oo tijaabo ah uu u soo bandhigay 24 jirka kooxda Fanja SC Saad al-Mukhaini. Saad ayaa labo maalmood tababar la qaadan doona Arsenal si uu u arko Wenger hadii uu anfacayo iyo hadii kale. Sidaasi waxaa qortay The Times. U soo wareegistii Thiery Henry kooxda Arsenal ee mudada labada bil aheyd ayaa waxaa hakinaya kooxda New York Red Bulls oo ku daaheysa saxiixa warqadaha heshiiska. Sidaais waxaa qortay The Sun.
Kooxaha Arsenal iyo Liverpool ayaa mar kale rajo ka yeeshay saxiixa ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Cologne Lukas Podolski, ka dib markii uu hakad geliyay wadahadaladii uu heshiiska ugu cusbooneynsiin lahaa kooxdiisa. Walow uu isaga cadeeyay inuusan bishaan Janaayo ka tagi doonin Jarmalka. Warkaan waxaa qortay jariirada ugu caansan Jarmalka ee Bild.
MANCHESTER UNITED: Kooxda Manchester United ayaa dagal fool ka fool ah la geli doontaa Hamburg oo ku aadan saxiixa kubadsameeyaha kooxda FC Basel Granit Xhaka, iyadoo tababare Sir Alex Ferguson uu raadinayo ciyaartoy u dhigma Wesley Sneijder. Sidaasi waxaa daabacday jariirada Metro.
KOOXAHA KALE EE INGARIISKA:
Kooxda Newcastle United ayaa la rumeysan yahay inay amaah ku dooneyso weeraryahanka kooxda Juventus Vicenzo Iaquinta, kaasoo booskiisa Juventus uusan meel saarneyn. Sidaasi waxaa daabacday jariirada Ingariiska ka soo baxda ee Daily Mail.
Kooxda Everton ayaa diyaar u ah inay dalab u gudbisato ciyaaryahanka Manchester United iyo Republic of Ireland Darren Gibson oo ay doonayaan inay ka soo kaxeeyaan Old Trafford, sidaasi waxaa qortay Manchester Evening News.
MILAN: Wargeyska Turin ka soo baxa ee Tuttosport ayaa sheegaya in wakiilka ciyaaryahan Alexandre Pato inuu wadahadal la yeeshay kooxda Faransiiska ee Paris Saint Germain, iyadoo Carlo Ancelotti la rumeysan yahay inuu aad u doonayo ciyaaryahanka da’da yar ee reer Brazil.
Iyadoo AC Milan ay suuqa ugu jirto weeraryahan ay ku daboosha maqnaanshiyaha ciyaaryahan Antonio Cassano, ayaa ciyaaryahan Robinho waxa uu ka hadlay fekerkiisa ku aadan Carlos Tevez iyo imaanshiyihiisa lagu wado San Siro, isagoo sheegay in Tevez uu guulo ku gaari doono Rossoneri. Waxaa warkaan daabacday Corriere dello Sport.
JUVENTUS: Juventus oo shalay xaqiijisatay saxiixeedii ugu horeeyay ee bishaan Janaayo markii ay aamah kula soo wareegeen weeraryahan Marco Borriello ayaa haatan waxa ay qorsheyneysaa inay dalab u dirsato weeraryahanka Real Madrid Gonzalo Higuain iyo ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Manchester United Nani. Sidaasi waxaa daabacday Tuttosport.
Kooxda Cagliari ayaa ka fiirsaneysa inay dalab u dirsato bishaan Janaayo kooxda Juventus oo ku aadan weeraryahankeeda kursiga keydka ka buuxiyay Luca Toni, 34 jirkaasi ayaan fursad fiican ku heysan kooxda Bianconeri. Sidaasi waxaa qortay Football Italia.
Juventus ayaa sidoo kale dooneysa inay iska iibiso weeraryahanada kala ah Amauri iyo Vincenzo Iaquinta oo ay doonayaan inay mushaharkooda iska reebaan madaama aysan qorshaha ugu jirin. Football Italia ayaa sidoo kale qortay.
ROMA: Wakiilka ciyaaryahanka tayada leh ee reer Brazil Carlos Henrique Casemiro ayaa u sheegay Roma inay haatan ciyaaryahan reer Sao Paulo kula wareegi karaan 5 milyan euro, islamarkaana ay tahay inay ka faa’ideystaan inta lacgtiisa aysan intaasi ka sii kicin. Waxaan Roma saxiixa ciyaaryahanka kula tartamaya Inter iyo Milan. Waxaa sidaasi qortay Gazzetta dello Sport.
INTER: 20 jirka daafaca uga ciyaara kooxda rer Brazil ee Internacional Juan Jesus ayaa sheegaya inuu 7da ama 8da bisha Janaayo ku sii jeedo dalka Talyaaniga isagoo doonaya inuu kaliya u ciyaaro kooxda Inter Milan. Sidaasi waxa uu u sheegay FCInter1908.it
Kooxda Inter Milan ayaa isku diyaarineysa bishaan Janaayo inay garoonka Juventus Stadium ka soo kaxeyso ciyaaryahan Milos Krasic kaasoo ka dhacay qorshaha tababare Antonio Conte, waxaana Ranieri uu u arkaa ciyaaryahan uu dib u habeen kula sameyn karo Internazionale. Sidaasi waxaa qortay Tuttosport.
Wakiilo ka socdo kooxda Inter Milan ayaa u duulay dalka Ingariiska, waxaana lagu soo waramayaa inay qeyb ka yihiin isku dayga ay Inter ku dooneyso inay AC Milan kaga afduubto saxiixa ciyaaryahan Carlos Tevez, oo suuqa kala iibsiga u saaran kooxda Manchester City. Sidaasi waxaa qortay Corriere dello Sport.
REAL MADRID: Kooxda boorsada weyn ee Paris Saint Germain ayaa isku diyaarineysa inay hesho kubadsameeyaha kooxda Los Blancos Ricardo Kaka, waxaana ay qorsheeyeen inay 61.5 milyan euro ku soo xero geliyaan laacibiinta reer Brazil Kaka iyo Pato. Sidaasi waxaa qortay jariirada Marca.
BARCELONA/REAL MADRID: Iyadoo la rumeysan yahay in kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay doonayaan saxiixa ciyaaryahanka kooxda Santos Neymar, ayaa hadana kooxda Santos ay qaaday talaabo kale oo ay ku sii ceshanayaan laacibkooda. Madaxweynaha kooxda Santos ayaa xaqiijiyay in albaabada la isagu dhuftay kooxda hablaha ee kubada cagta Santos iyo kooxda kubada Futsall-ka ee Santos, isagoo sheegay in labadaasi waaxood lacagtii ku bixi laheyd lagu kabayo mushaharka Neymar. Sidaasi waxaa qortay Marca.
Kooxda Barcelona ayaa kula tartami doonta kooxda PSG saxiixa 18 jirka kooxda Manchester United ee khadka dhexe Ravel Morrison. Sidaasi waxaa daabacday jariirada reer Catalan Sport.es
ATLETICO MADRID: Kooxda Atletico Madrid ayaa ka cagajiideysa inay u ogolaato ciyaaryahan Jose Antonio Reyes inuu ku biiro kooxda Sevilla, waxaana ay dib u dhigeen wadahadalo ay la gali lahaayeen Sevilla oo ku aadan saxiixa ciyaaryahanka. Sidaasi waxaa daabacday jariirada AS.
Kooxda Chelsea oo ku qanacday horumarka uu goolhaye Courtois ku sameynayo kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay qarka u saaran tahay inay ogolaato inuu xilli ciyaareed kale la sii joogo kooxda Spain ka hor inta uusan ku laaban Stamford Bridge. Sidaasi waxaa qortay AS.
La Wadaag Maqaalkaan Asxaabtaada:FacebookTwitterGooglePinterestTumblrFekradaada Facebook Ku Dhiibo Ama Qeybta Hoose Ee Fekradaha: Fekradood ayaa laga bixiyay.	2012-01-04